Fampihavanam-pirenena: “ny lasa niaraha-nodiavina, ny ankehitriny iaraha-miatrika, ary ny ho avy iaraha-manorina” | Région Boeny
Izany dia nohamafisin’ny solo-tenan’ny FFKM nasionaly fa “ny lasa niaraha-nodiavina, ny ankehitriny iaraha-miatrika, ary ny ho avy iaraha-manorina” mba hamaranana ny krizy politika miverimberina.
Arak’izany hoy ireo mpandrindra ny fanka-kevi-paritra dia zava-dehibe ny vitan’ny FFKM tamin’ny 15 janoary, nanomboka nampihavana ireo Filohan’ny Repoblika teo aloha sy ny Filohan’ny Tetezamita ary ny Filohan’ny Repoblika am-perin’asa. Fihaonana nahafan’ny FFKM nampanao sonia azy dimy ireo manoloana ny dinika 4F na ny Fibebahana, Fahamarinana, sy Fihavanana ary Fihaiken-keloka ka tokony hijoro ho modely amin’ny fampihavanana izy ireo ary hifanome tanana ho amin’ny fitoniana maharitra mba hirosoan’ny firenena ho amin’ny Fampandrosoana.
Marihina fa nahatratra roanjato latsaka kely ny isan’ireo mpizaika raha 186 no nandrasana.
Voatendry taorin’izay ireo solotenan’ny mpizaika hiatrika ny fikaonandoham-pirenena ny 25, 26, 27 marsa ho avy izao any Antananarivo izay nahitana ny avy ao amin’ny FFKM, ireo solotena avy amin’ireo Filoha dimy ary ireo sokajin’olona rehetra miainga avy aty amin’ny Faritra. Nahatratra 770 ny isan’izy rehetra ireo.